Umthandazo weSaint Cyprian Black Cover | Ukubophelela kothando kunye noKhuseleko
kuqala » Imithandazo » Umthandazo weSaint Cyprian Black Cover
Umele ukuba uvile ngabanamandla Umthandazo kuSaint Cyprian da Capa Preta, oko kukuthi, ukusuka yakhe edumileyo free.
Incwadi kaSaint Cyprian yakhululwa kwiminyaka emininzi eyadlulayo.
Kuthiwa kuyo yeyona mithandazo inamandla kwaye inamandla kuyo yonke into esinayo, kodwa hayi kuphela…
Kusekho iindlela zokwenza izivumelwano nalo ngcwele ukuze ufumane uncedo lwakhe, kodwa oku kuza ngexabiso eliphezulu kakhulu emva kokufa kwethu!
Omnye wabafundi bethu wasicela ukuba sithandaze kule ncwadi idumileyo ukuze sikwazi ukubopha uthando. Ngethamsanqa sifumene enye kwi-Intanethi eyaziwayo kwaye esele isetyenziswa kakuhle.
Kuyo akuyi kufuneka uzalisekise naluphi na uhlobo lwesibophelelo ngakungcwele, ngoko musa ukoyika ukuyithandaza.
Injongo yomthandazo we-Black Cover
Injongo yalo mthandazo unamandla usuka kwiNcwadi ye-Black Cover yaseSaint Cyprian kukubopha lowo umthandayo ngokuqinisekileyo.
Isebenza kwimicimbi yothando eyahlukeneyo apho kukho umgama, ukungonwabi kunye nosizi kubudlelwane.
Yomelele kakhulu njengoko kucingelwa ukuba yathathwa kwincwadi yakhe engcwele abantu abambalwa ababenokufikelela kuyo.
Kukho le ncwadi ithengiswayo kwi-intanethi, kodwa kukho abo bathi ikopi ye-intanethi ayinalo ulwazi lwencwadi yokuqala ebhaliweyo ... Bathi amandla ayo awafani nokuthelekisa!
Abantu abaninzi bayoyika nokuthandaza le mithandazo, kodwa sinomnye wakho ongamele woyike.
Ulula, uyakhawuleza ukuthandaza kwaye akunyanzelekanga ukuba enze naluphi na uhlobo lomnikelo okanye isithembiso ngokutshintshiselana noncedo lwalo ngcwele.
UTata ngumthandazo weSaint Cyprian emnyama yesigqubuthelo sothando kunye nokubopha okuqinisekileyo kuye nawuphi na umntu.
Ngaphandle kokuqhubeka, jonga lo mthandazo unamandla ungezantsi.
Umthandazo weSaint Cyprian da Capa Preta wothando kunye nokubetha
Ngamandla eSaint Cyprian kunye nee-meshes ezintathu ezibukele iSaint Cyprian, (igama lomntu) ziya kuza ngoku kwaye kwangoko emva kwam.
(Igama lomntu) uya kubuya, eluthandweni, ugcwele uthando, uphondo kum, uzobuyela kum ucele uxolo ngokukhawuleza.
Saint Cyprian, yenza (igama lomntu) ulibale kwaye ushiye okulungileyo nawuphi na omnye umfazi onokuba usezingcingeni zakho, ethanda mna kuphela.
I-Saint Cyprian gcina kude (igama lomntu) nawuphi na umntu obhinqileyo, wanga angandijonga ngalo lonke ixesha, namhlanje kwaye ngoku, enqwenela ukuba secaleni kwam, angaqiniseka ukuba ndim kuphela umfazi ebomini bakhe.
UCyprian oNgcwele, qiniseka ukuba (igama lomntu) akanakuphila ngaphandle kwam, akanako ukuzola okanye ukuphumla, ukuba akanakuba naphina ngaphandle kokuhlala enomfanekiso wam kwiingcamango zakhe, nasentliziyweni yakhe, ngamaxesha onke.
Ukuba xa ulala, kufuneka uphuphe kunye nam, ukuba xa uvuka, ngokukhawuleza kufuneka ucinge ngam, unokunqwenela kuphela kum, kwaye ufuna ukuba nam kuphela.
USyprian oNgcwele, wangathi (igama lomntu) cinga ngam ngalo lonke ixesha lobomi bakho. Oko (igama lomntu) lifuna ukundanga, ukundanga, undinakekele, undikhusele, undithande yonke iminithi, yonke isibini, yonke imihla yobomi bakho. Ukuba undithanda ngakumbi yonke imihla kwaye uziva uyonwabile kuphela kunye nam.
I-Saint Cyprian yenza (igama lomntu) uzive kum uthando, umsa kunye nomnqweno, ngathi awuzange uve ngaye nawuphi na omnye umfazi kwaye awusoze.
Kwangathi ungazonwabela mna qha ungandirhalela qha umzimba wakho ube ngowam qha ungaphumla uphumle xa unam.
Ndiyabulela ku-São Cipriano ngokusebenza ngokuthanda kwam kwaye ndiza kuchaza igama lakho ngokutshintshiselana (igama lomntu) kwaye ndimzisele onomdla, ozinikeleyo, othembekileyo kwaye ozele luthando kunye nomnqweno ezingalweni zam.
Ndiyakucela, u-Cyprian wam ozukileyo, ukuba (igama lomntu) ubuyele kum, kubudlelwane bethu / uthando lwethu / umtshato wethu, ngokukhawuleza. Ndiyibuza le nto isuka emazantsi entliziyo yam, kumandla eentsimbi ezintathu ezimnyama ezibukele iSão Cipriano.”
Uthandaza njani umthandazo odumileyo
Usenokuba sele uqaphele ukuba umthandazo kaSaint Cyprian ovela kwincwadi ye-Black Cover mde kancinane, kodwa ungothuki.
Unjalo nje kuba kuye uthetha yonke into efunekayo ukuze kuqatshelwe olu thando nobonding.
Ukuthandaza kufuneka kuphela endaweni yegama lowo umthandayo.
Sicebisa ukuba ufake igama lakho elipheleleyo, kodwa ukuba awunalo, ungasebenzisa igama lakho lokuqala okanye ifani.
Akukho xesha lilungileyo lokuthandaza, kodwa sihlala sicebisa ukuba zama ukuyenza kwinyanga ebomvu.
Esi sigaba senyanga sinokwenza imithandazo kunye novelwano lomelele.
Xa kunjalo, ukuba uthandaza kwesi sigaba senyanga, uya kufumana amandla ngakumbi ngokuthandaza umthandazo.
Ungathandaza ngolunye usuku olucacileyo, kodwa awuzukwazi ukufumana amandla amaninzi ngokungathi uthandaza kwisigaba senyanga esihlayo.
Enye into ebalulekileyo onokuyikhankanya kukuba unokuthandaza yonke imihla, kube kanye ngemini. Ngale ndlela ke uya kuhlala ukhumbuza ingcwele eligorha ukuba likuncede.
Ngaba ndingathandaza kuye ngaphandle kokubingelela?
Enyanisweni, akukho mfuneko yokuba wenze naluphi na uhlobo lomnikelo ukuze umthandazo usebenze.
Kukho imithandazo emininzi esiyincomayo, kodwa hayi lo.
Oku kungenxa yokuba unamandla kwaye womelele kangangokuba awufuni kwa umnikelo ukuba lo ungcwele akuncede.
Ngokuqinisekileyo, unokuhlala usenza into elula, njengokukhanya kwekhandlela ezibomvu ezi-7 phambi komfanekiso wakhe, kodwa akunyanzelekanga.
Into ebalulekileyo phakathi kwayo yonke le nkqubo kukuba nokholo.
Njengoko besesitshilo, ungawenza umnikelo kwaye oko kuya konyusa amandla omthandazo nangakumbi, kodwa sukuwenza nzima kakhulu.
Ukuba uthatha isigqibo sokwenza enye, khanyisa amakhandlela abomvu kwaye thandaza umthandazo ubuncinci amaxesha ama-3 ngokulandelelana.
Thandaza njalo I-Saint Cyprian ukuze abuyisele uthando
cela uncedo okwangoku ukubophelela umntu
Ngaba ufuna ukwahlula isibini? Lo mthandazo weNgcwele uya kukunceda
Ukusukela ngoku ukuya phambili, sele unomthandazo oya eSão Cipriano da Capa Preta ukukunceda ngothando kunye nokubetha okuqinisekileyo.
Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba ukholo sisiseko sayo yonke imithandazo.
nge nokholo siya kukwazi ukufezekisa naluphi na ubabalo, nokuba kunzima kangakanani, kuba kukho amandla amaninzi asebenza ngokusixhasa.
1 Injongo yomthandazo we-Black Cover
2 Umthandazo weSaint Cyprian da Capa Preta wothando kunye nokubetha
3 Uthandaza njani umthandazo odumileyo
4 Ngaba ndingathandaza kuye ngaphandle kokubingelela?